Ngaba uyazi ukuba yeyiphi eyona fowuni inkulu ehlabathini?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba uyazi ukuba yeyiphi eyona fowuni inkulu ehlabathini?
Ngaba uyazi ukuba yeyiphi eyona fowuni inkulu ehlabathini?
Uyazi, imboni yeselfowuni igcwele izinto ezintle nezingaqhelekanga. Ukuba ziiselfani maniacs esizo, siyazi uninzi lwazo, kodwa ndiyaqikelela ukuba kusekho ezinye izinto ezinokuthi zihlale zingabonakali kwabanye bethu. Kule posi ivela kuthotho 'lwefowuni eyoyikisayo' uthotho, thina kunye neapos siza kuthetha ngesona sithwali sikhulu ehlabathini!
Yintoni iapos enomdla kakhulu ngaloo nto? Ewe, qagela ukuba yeyiphi eyona nto iphetheyo emhlabeni ayisiyi-AT & T yokuhamba, okanye iVerizon Wireless. Ke, ngubani onenani elikhulu lababhalisi?
I-China Mobile yeyesona sithwali sikhulu emhlabeni kunye nababhalisi abazizigidi ezingama-703.46. Oyena mphathi ubalaseleyo emhlabeni uvela kwilizwe elikude lase China, kwaye ubizwa ngokuba yi China Mobile! I-China Imfono isebenza inani elinomtsalane labathengi abazizigidi ezingama-703.46 (idatha ukusuka ngo-Novemba ka-2012) - ngaphezulu kokuphindwe kabini kubemi bamazwe amanyeneyo. Ngaba ayimangalisi loo nto? Elona lizwe liphetheyo liphethe ilizwe liphethe ilizwe lase China, kwaye ngenxa yoko ilawulwa ngurhulumente wase China. I-China Mobile yenziwa ekupheleni kwenkulungwane yama-20, xa iza kwahlulwa kumqhubi wesithathu ngobukhulu kweli lizwe- iTshayina Telecom, ekwangurhulumente.
Kodwa ukuba i-China Mobile iyona inkulu, kwaye i-China Telecom ngoyena uphethe isithathu ngobukhulu kwiRiphabliki yaBantu ne-Apos, e-China, ngubani ke ophakathi? Impendulo yi China Unicom- yenye into ephethwe ngurhulumente.
Ke baphi abantu bethu abaziwayo baseMelika abangena kuwo wonke umfanekiso? Okwangoku, oyena mphathi mkhulu wase-US, iVerizon Wireless, ikwi-19 kuluhlu lwabaphethe umhlaba ngenani lababhalisi (i-108.7 yezigidi), ngelixa i-AT & T Mobility ingama-21 kunye nezigidi ezili-107. Ngelishwa, zombini i-Sprint kunye ne-T-Mobile yase-USA azikho kuluhlu oluphezulu lwama-30, ebonisa ukuba ukuzama ukudibana phakathi kwe-AT & T kunye ne-T-Mobile kunokuba ngumbono ombi!
Ungafikelela kuluhlu olupheleleyo lwehlabathi kunye nezona ziphathekayo ziphambili Apha .
yenziwe phi i-pixel kaGoogle
Iifowuni zesamsung eziphakathi ku-2019
Umhla wokukhutshwa kweerizon gear s3
I-Samsung Galaxy Tab S7 ifumana isaphulelo esikhulu se- $ 200 eAmazon
Zeziphi ii-iPhones eziya kufumana i-iOS 15?
Isitshizi! Isizukulwane sesithathu seApple iPod touch prototype eneekhamera ezingasemva kwi-Twitter
Ungayixelela njani ukuba ibhetri ye-smartphone yakho iphilile okanye imbi (i-iPhone kunye nesikhokelo se-Android)
Isoftware yeSpotify inokukwazi ukudlala ilayibrari yakho yomculo, kubandakanya neengoma zalapha ekhaya
Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Utshintsha njani useto lwebhodi yezitshixo kuGoogle kwiLollipop
I-Apple iPhone 5s, iApple iPhone 5c umhla wokukhutshwa ngentseni yangoLwesihlanu
Iqela likaGoogle noFacebook linikezela simahla, angenasiphelo kwi-WhatsApp kwiGoogle Drayivu